Shirkii Ka Socda Magaalada Astana oo lasoo gaba gabeeyay iyo qodobo Kasoo Baxay.
Wednesday January 25, 2017 - 18:11:16 in Wararka by Super Admin
Waxaa soo gaba gaboobay shirkii ay soo qaban qaabiyeen dowladaha reer galbeedka iyo kuwa qeybta ka ah duullaanka lagu qaaday wadanka Suuriya.
Wadahadalladii ka socday magaalada Astaana ee dalka Khazakhistaan ayaa lasoo gunaanaday iyadoona ay kasoo baxeen qodobo ay ku heshiiyeen kooxaha mucaaradka dhax-dhaxaadka Suuriya iyo Nidaamka Bashaar Al-asad.
Bayaan khitaami ah oo kasoo baxay shirka Astana ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay Ninka lagu magacaabo Kheyrat Cabdi Raxmaanoof oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Dabadhilifka Kazakhistaan.
Qodobka ugu muhiimsan ee shirka Astaana lagasoo saaray ayaa ah in ladhiso guddi sedax geesood ah oo dhidibada u adkeynaya heshiiskii xabad joojinta ahaa ee dhinacyadu horay ugu yeesheen magaalada Ankara ee wadanka Turkiga.
Sida lagu sheegay bayaanka guddiga sedax geesoodka ah oo ka kooban dowladaha Ruushka, Iiraan iyo Turkiga ayaa kormeeri doono qaabka xabad joojintu u dhaqan gasho waxayna si gaar ah ula socan doonaan ciidamada Nidaamka Suuriya iyo maleeshiyaadka shiicada ajaanibta ah oo la sheegay in marwalba ay jabiyaan heshiiska xabad joojinta ah.
Max’med Calluush oo mucaaradka qunyar socodka ah u matalayay heshiiska ayaa sheegay in dowladda Ruushka ay dhankoodau damaanad qaadday in mar dambe nidaamka iyo xulufadiisa aysan weeraro dhanka dhulka iyo cirka ah qaadi doonin.
War murtiyeedka kasoo baxay shirka Astaana oo badankood ah kuwa Ashahaadda ladirir ah kana dhan ah islaamka iyo muslimiinta waxaa lagu yiri " dhammaan dhinacyadu waxay isla adkeeyeen Midnimada dhulalka Suuriya oo ah dowlad diimo kala duwan leh, waxayna islagarteen in xal melleteri uusan aheyn mid lagusoo gaba gabeyn karo dhibaatada wadanka ka taagan”.
Sidoo kale wafdiga Mucaaradka iyo Nidaamka Al-asad oo lagu daray dowladaha sedaxda ah ee kor joogtada ka ah xabad joojinta waxay isku raaceen la dagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada in xabad joojintu aysan ka dhaqan gelin magaalooyinka iyo deegaanada ay ka maamulaan laba koox oo ay kamid tahay Jabhadda Fatxu Shaam.
Dowladaha cadawga ah ee shirka daadihinaya ayaa go’aamiyay in shir kale oo lagu maleego khiyaano hor leh oo ka dhan ah muslimiinta Shaam lagu qaban doono magaalada Gineva ee wadanka Swezerland 8-da Bisha 2-aad 2017.
Dhinaca kale war kasoo baxay jabhadda Fatxu Shaam ayay ku sheegtay in ay ka hor tagi doonto dhaqan gelinta qodobada shirka astaana.
Bayaan Fatxu Shaam ay soo saartay ayay uga digtay xoogag Suuriya ka dagaallama in ay ku dagmaan dhagaraha cadawga waxayna Jabhaddu ku hanjabtay in awood walba oo ay ku leedahay u adeegsan doonto ka hortagga dhaqan celinta mashaariicda ka dhanka ah thowrada suuriya ee dibadaha lala wareegayo.